Garabka kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa la sheegayaa inuu hal shuruud oo kaliya ku xidhay inuu ku biiro kooxda saxeexiisa isha ku haysa saacadaha ugu dambeeya suuqan ee Manchester United oo maalmahan ugu dambeeyay daba-joogtay.
Man United ayaa u dhaqaaqday saxeexa Dembele iyagoo ka dhiganaya bedelka ay kaga samrayaan Jadon Sancho maadaama oo madaxa kooxdaas ee Ed Woodward uu ku fashilmay inuu Borussia Dortmund kala soo saxeexdo da’yarkaas.
Barcelona ayaa sanadkii 2017 lasoo wareegay Dembele oo qudhiisu wakhtigaas Dortmund ka tirsanaa iyagoo ka qabay rajo weyn una arkayay bedelka Neymar JR oo kaga biiray dhinaca Paris Saint-Germain.
Barcelona ayaa aduun dhan 136 Milyan oo Pound ka bixisay saxeexa Dembele xilli uu xiddiga heer caalami kaliya wakhtigaas 12 bilood kahor Dortmund kaga biiray dhinaca kooxda Rennes.
Si kastaba, wakhtiga Ousmane ee Camp Nou ayaan noqon mid si wanaagsan u shaqeeyay isagoo kusoo dhibtooday qaab ciyaareed joogto ah la’aan iyo waliba dhaawacyo is daba joog ah.
Dembele ayaa hadda iskaga tagi kara Barcelona maadaama tababaraha cusub ee kooxdaas ee Ronald Koeman uu hoos uga dhigay liiska xulashada shaxdiisa koowaad ee kooxda.
Xaalad kastaba, sida uu sheegayo wargeyska The Times, Dembele ayaa u sheegay Manchester United inuu ku biiri doono haddiiba ay kooxdu heshiis rasmi ah oo wakhti dheer ah ka saxeexanayso.
Red Devils ayaa isku dayayay inay qaab amaah ah kula soo saxeexdaan maadaama oo aysan rabin inay lacag badan ka bixiyaan xiddig inta uu garoomada ka maqnaa ay ka badantahay inta uu ku jiray saddexdii sano ee ugu dambeeyay.
Waxa adag suurogalnimada ay Man United ku oofin karto shuruudaas iyo inay heshiis rasmi ah siiso Dembele iyagoo u doonaya kaliya amaah ahaan iyo inuu xalka mudo gaaban u noqdo.